Tilmaame yar oo awood u leh inuu isku daro ilo kala duwan | Abuurista khadka tooska ah
Waxaa jira dad badan siyaabo la isugu geeyo noocyadaQaar ka waxtar badan kuwa kale, si kastaba ha noqotee, meesha ugu habboon ee laga bilaabi karo waa in la fahmo doorka nooc kasta oo diiradda la saaro tayada uu leeyahay.
1 Immisaa aad u badan?
2 Sida loo doorto font wax ku ool ah
3 Sida loo doorto far shaqsiyeed
3.1 Kala bar muuqaalka
3.2 Noocyada isbarbar dhiga
Immisaa aad u badan?
Waxaa jira sharci oranaya wax ka badan 3 nooc waa in loo adeegsadaa hal naqshad, maadaama astaanta ay isticmaasho 1 ama 2 nooc, badanaa waa ku xaddidan yahay 2 weji. Guud ahaan, cinwaannada si ay u istaagaan isla marka aad bog iskaaneyso, waa inaad u isticmaal hal xarfaha jirka qoraalka mid kalena qaabkiisa. Si kastaba ha noqotee, waad iftiimin kartaa cinwaannadaada adoo adeegsanaya kala duwanaansho geesinimo leh ama dhawaaq lahjad ah - haddii si kale loo dhigo, noocyada farta yar ee aad sida ugu fiican u isticmaasho.
Sida loo doorto font wax ku ool ah
Caadi ahaan, xulashada xarfaha hore waxay ka bixi kartaa faraha, maxaa yeelay shirkadaha u muuqdaan inay abuuraan nooc ka mid ah warqad ama koox ka mid ah noocyada, iyada oo qayb ka ah tilmaamaha astaantaada. Mararka qaar, waa suurtagal in la helo shaqo leh shuruudo cayiman, sida boos kooban oo u baahan kara waji aad u badan oo is haysta ama qaddar badan oo qoraal ah oo ay tahay in laga akhriyi karo meelaha aad u yar. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka heli karto bog gebi ahaanba bannaan oo leh a fursado kala duwan oo aan xad lahayn, Meesha ugu fiican ee laga bilaabi karo ayaa ah qaybta ugu sareysa qoraalka, oo laga yaabo inay tahay nuqul jirka ah.
Markaad dooranaysid font for jirka qoraalka, waxa ugu weyn ee aad ka walwalsan tahay waa inay ahaato akhrinta.
Sida loo doorto far shaqsiyeed
El dooro fartaada ugu horeysa akhrinta wanaagsan badanaa waa kiis aad u baahan tahay inaad doorato qalab runtii lagu kalsoonaan karo. Laakiin markaad dooranayso farta labaad, waxaa jira 2 waxyaalood oo laga fiirsado:
Marka hore, qaab-qoraalkan waa inaan loo dooran ficil ahaan, haddii kale siinta qofnimo, sidaa darteed waa lagama maarmaan in la fahmo in aysan ahayn in lagu doorto shaqsiyaddiisa oo keliya, laakiin noocaas 2aad waa inuu muujiyaa shakhsiyadda kan ugu horreeya.
Nooc kasta oo dabeecad ah ayaa leh shakhsiyad, badankooduna waxay leeyihiin muuqaalada badan. Haddii aad doorato 2 ka mid ah oo leh astaamo isku mid ah, marka la isku darayo, astaamahaas waa la badin doonaa.
Marka labaad, qaab-qoraalkaan wuxuu kaaga baahan yahay inaad fiiriso isagoo iska dhigaya kaas oo si sax ah ula shaqeeya midka hore, maadaama sidan oo kale cod aad u isku xidhan lagu sii faahfaahin karo. Waxaad ubaahantahay inaad raadiso wajiyo leh saami isku mid ah, taasi waa, saamiga dhererka X ilaa koriyeyaasha Waa inay noqotaa mid la mid ah, sidoo kale qaabka tirinta.
Dhismayaashaas, waxaad leedahay 3 beddelaad oo aad ku dooran karto farta 2aad:
Sharad aamin ah
Dhowr jilayaal ayaa laga helaa loogu talagalay serif ama aan lahayn serif tusaale ahaan, Meta waxay leedahay Meta Serif halka Scala Sans ay leedahay Scala Serif. Qiimaha isku darka farta ee isbiirsada midba midka kale waa qaababka xarfaha caadiga ah badiyaa waa isku mid iyo heerka isbarbar yaaca uu aad u yar yahay, in kastoo ku filan in lagu sharaxo codsiga dheeraadka ah ee http.
Kala bar muuqaalka
Haddii aad dooratay wejiga jirka ee la akhriyi karo, markaa waxaad dooran kartaa weji shaashad ah oo aan la akhriyi karin. Haddii aad doorato wejiga joomatari ee jirka, waa inaad tixgelisaa dhinaca bani'aadamnimada ee soo bandhigidda. Haddii wejiga jirku diiran yahay oo soo dhaweynayo, isku day weji shaashad aad u awood badan oo fog.
Noocyada isbarbar dhiga
Qaabka loo sameeyo tan waa iyadoo la aqoonsado astaamaha ugu muhiimsan ee nooca hore, ka dibna hel ilbiriqsi kaliya oo la wadaagaya astaamahaas. Tani waa tan ugu adag habka ugu adag, maadaama inbadan oo kamid ah ay tahay mid shaqsiyadeed, inkasta oo ay waliba tahay ikhtiyaarka taas kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan isku dhafan la yaab leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sida loogu guuleysto isku dhafka font
Aad baad ugu mahadsantahay macluumaadka, Jorge. Waxaa laga yaabaa in qoraalka maqaalka la sii wanaajin lahaa oo wuxuu kaa caawin lahaa in si fiican loo fahmo. Habsiin
Talooyin wanaagsan, laakiin tarjumaadda ereyada qaarkood ma caawinayso, tusaale ahaan, tiriyayaal? Waxaan qiyaasayaa inay ula jeedo xisaabiyeyaasha macnaha, taas oo noqon laheyd ka soo horjeedka ama meelaha xun ...
"Cara" wuxuu wajahayaa Ingiriis ... waxaa loola jeedaa naqshadeynta qaab qoraalka, font, nooca qoraalka, aan u gudubno xulashada qaab qoraalka ...
Jawaab Salma Casab
Juan | astaamo dijo
Shabakadu waa weyn tahay. Uma baahni inaan kugu caajiso tirakoob inta macluumaad ah ee jirta, laakiin waxaad hubsan kartaa in waxyaabaha aad ku bixin karto boggaaga laga heli karo meelo kale. Ku socodsiinta degel ku-meel-gaadh ah oo ku-meel-gaadh ah oo guul leh waxay noqoneysaa arrin lagu dheellitirayo hannaanka aan dhammaadka lahayn ee abuurista waxyaabo aad u wanaagsan iyadoo la isku hagaajinayo khibradaha isticmaalaha
Noocyada noocyadu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan waxaas oo dhan.
Jawaab Juan | astaamo